16-inji ee soo socota ee 'MacBook Pros' ayaa laga helay keydka nidaaminta Shiinaha | Waxaan ka socdaa mac
Maaha markii ugu horeysay Waxaan maqalnaa oo aqrinnaa kutiri-kuteenta ku saabsan jiritaanka suuragalnimada moodello cusub oo 16-inch ah oo loo yaqaan 'MacBook Pro'. Iyadoo la adeegsanayo bandhig yar-yar iyo soo-saaris wanaagsan oo loo yaqaan 'M1 chip'. Waxay umuuqataa inaan kudhawaano inaan xaqiiqo noqono maxaa yeelay sida laga soo xigtay MacRumors ayaa ku arkay jiilka soo socda MacBook Pro kaydinta macluumaadka nidaaminta Shiinaha.
Buugaagta wax lagu qoro ayaa la filayaa inay keenaan naqshad dusha sare iyo hoose ah iyo dekedo badan, oo ay ku jiraan soo noqoshada dekedda HDMI, kaarka SD-ka, iyo xadhigga awoodda birlabta. Xanta ayaa sidoo kale soo jeedineysa in Touch Bar laga fariisanayo oo loo doorto furayaasha jirka ee Fn. Kuwani cusub 16 ″ MacBook Pros ayaa lagu helay in database Shiinaha. Liiskan, oo lagu soo bandhigay 14-kii Abriil shirkadda Apple ee Sunwoda Electronic, ayaa loogu talagalay batteri leh aqoonsi la mid ah Apple A2527 oo leh qiimeyn 8,693 mAh / 11.45V. Tani waxay la mid tahay tan hadda jirta ee 16-inji ah ee loo yaqaan 'MacBook Pro', kaas oo lagu qiimeeyay 8,790 mAh / 11.36V, sida laga soo xigtay iFixit.
Haddii soojeedintu sax tahay, 16-inji MacBook Pro ah ee soo socda ayaa waxyar ka yaraan doona awoodda batteriga marka loo eego tusaalaha jira, taas oo ay ugu wacan tahay naqshadaynta naqshadeynta buugaagta. Si kastaba ha noqotee, saameyn kasta oo saameyn ku yeelan karta nolosha batteriga waxay u badan tahay in la yareeyo 16-inch MacBook Pro oo ka soo wareegaya processor-ka Intel illaa Apple Silicon awood badan. Dhab ahaan, nolosha batteriga weli waxay ku dhammaan kartaa inay ka sii dheeraato jiilka hadda jira.
Waxay u muuqataa inaan qarka u saaran nahay inaan aragno laptop-ka cusub ee Apple. Shan maalmood laga bilaabo bilowga WWDC. Waan arki doonaa haddii aanan haysan soo bandhigida 16-kan cusub ee 'MacBook Pro' bishaas Juun 7deeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » 16-inch ee soo socota ee 'MacBook Pros' ayaa laga helay keydka nidaaminta Shiinaha